Global Voices teny Malagasy » Kyrgyzistan, Fampahalalam-baovao Torian’ny Mpampanoa Lalàna ho Manevateva ny Filoha · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Marsa 2017 14:52 GMT 1	 · Mpanoratra Eurasianet Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kyrgyzstan, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fifandraisana iraisam-pirenena, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Filoha Kyrgyz Almazbek Atambayev (ankavia) nihaona tamin'ny filoha Rosiana Vladimir Putin. Sary ofisialin'ny governemanta Rosiana, nomena lisansa ho azo ampiasaina indray .
Ity manaraka ity dia lahatsoratra fiarahamiasa  avy amin'ny EurasiaNet.org . Nahazoana alalana ny famoahana azy indray.
Niampanga fampahalalam-baovao lehibe roa ho nanevateva ny filoha tamin'ny fanapariahana “vaovao diso” momba azy ny mpampanòa lalàna ambony ao Kyrgyzistan ary nilaza fa hangataka onitra any amin'ny tribonaly ny biraony.
Nilaza i Indira Djoldubayeva tamin'ny 9 Martsa fa hangataka onitra 26 tapitrisa som (375 000 dolara) amin'ny Radio Azattyk, tolotra Kyrgyz an'ny radio RFE/RL vatsian'i Etazonia ara-bola, sy tranonkalam-baovao Zanoza.kg sahisahy koa ny Biraon'ny Fampanoavana.
Nametraka fitoriana roa samihafa ny biraon'ny mpampanoa lalàna noho izy manam-pahefana hiantoka ny voninahitra sy ny fahamendrehan'ny filoha Almazbek Atambayev.
Napetraka ny fitoriana voalohany noho ny tatitra navoakan'ireo fampahalalam-baovao roa momba ny fanambarana imasombahoaka nataon'i Omurbek Tekebayev mpitarika mpanohitra migadra any am-ponja, fanambarana izay mamely an'i Atambayev. Raha ny marina kokoa, nilaza ny filohan'ny antoko Ata-Meken fa Atambayev no tompon'ny entana lehibe tao amin'ny fiaramanidina nianjera tamin'ny volana Janoary tao ivelan'ny renivohitra Bichkek, izay namoizana olona miisa 39. Niparitaka toy ny tsaho tany am-boalohany ny fiampangana milaza fa toa misy ifandraisany amin'i Atambayev ny tatitra momba ilay fiaramanidina mpitondra entana Boeing 747.
Nilaza ireo mpisolovavan'i Tekebayev fa nosamborina ny mpanjifan'izy ireo noho ny fananany antontan-taratasy manaporofo ny zavatra nambarany. Niparitaka tamin'ny fampahalalam-baovao ny fanamarihana avy amin'ireo mpisolovava, ary tsy ny Zanoza.kg sy Azattyk ihany no namoaka izany vaovao izany.
Nilaza ny biraon'ny filohan'ny fampanoavana fa “nanararaotra ny fahalalahan'izy ireo maneho hevitra” ny fampahalalam-baovao ary tsy nahavita nanamarina ny tatitra navoakan'izy ireo, izay nolazaina fa “fanalam-baraka” ny filoha izany.
“Misy ireo olona sasany mahita ny fahalalahana maneho hevitra ho fanomezana fahafaham-po maimaim-poana ny fanirian'izy ireo manokana ary matetika mamalifaly ny tenany izy ireo amin'ny alalan'ny fanapariahana vaovao tsy azo antoka sy tsy mitombina, indraindray miaraka amin'ny votoaty manohintohina izay tsy manambany ny voninahitra sy ny fahamendrehan'ny mpiray tanindrazana amin'izy ireo ihany fa ny an'ny filoha ihany koa izay mijoro ho an'ireo olona ireo” hoy ny biraon'ny fampanoavana tamin'ny fanambarana iray.
Mitaky amin'ireo seha-baovao voalaza mba handà ny votoaty tamin'ny tatitr'izy ireo momba ilay raharaham-panevatevana ny manampahefana sy handoa ny onitra ho an'i Atambayev noho ny fahavoazana ara-moraly – 10 tapitrisa som haloan'ny Azattyk ary 3 tapitrisa haloan'ny Zanoza.kg.
Tsy mazava ny antony nahatonga ireo fampahalalam-baovao roa ireo ihany ho niharan'izany manokana, satria ny ankamaroan'ny fampahalalam-baovao tao amin'ny firenena fara faharatsiny dia nilaza sompirana an'ilay fanambarana avokoa, izay nivoaka voalohany tao amin'ny foiben'ny sampam-baovao lehibe indrindra. Ny fanazavana mety holazaina angamba dia satria ny Azattyk et Zanoza.kg no mamokatra tati-baovao betsaka indrindra momba ny governemanta.
Miatrika fiampangana hafa ihany koa ireto fampahalalam-baovao roa ireto noho ny tatitra fiampangana hafa navoakan'i Tekebayev mikasika ny kaontim-banky voalaza fa an'i Atambayev ao Shipra..
Nilaza ireo mpampanoa lalàna fa “tsy mifanaraka amin'ny zava-misy” ny antsipirahan’ izany tantara (kaonty any amin'ny banky) izany ka mametraka ny filoha any amin'ny toerana ratsy. Noho ity raharaha ity, nangataka 3 tapitrisa som avy amin'ny Zanoza.kg sy 10 tapitrisa som avy amin'ny Azattyk ny manampahefana.
Nilaza i Dina Maslova tonian-dahatsoratry ny Zanoza.kg, fa azo antoka toa hanatsara ny lazan'ny media fa tsy ny an'ny filoha ity raharaham-pitsarana ity. Ny olana lehibe dia tsy maintsy handany vola be ny tranonkala amin'ny ezaka fiarovana ny tombontsoany ara-barotra raha tokony hifantoka amin'ny tati-baovao, hoy i Maslova tamin'ny EurasiaNet.org .
“Ho ahy, toa misy ireo olona ao amin'ny manodidina ny filoha no sorena, saingy amin'ny fanoroana hevitra azy mba hitory ny famoaham-baovao antserasera, namitaka azy ry zareo. Tsy misy fomba hafa hanazavana ity fanapahan-kevitra tsy malina ity”, hoy i Maslova.
Miatrika ny fampandoavana onitra 10 tapitrisa som ireo mpisolovavan'i Ata-Meken noho ny fandefasana fanambarana fananan'i Atambayev entana lehibe tao amin'ilay fiaramanidina nianjera .
Nametraka ny fitoriany manokana an'i Atambayev ihany koa ny Ata-Meken, noho ny nanondroan'i Atambayev vao haingana imasombahoaka ny antoko ho “antoko maimbo” ary niantso an'i Tekebayev ho «mpandroba» — ity farany ity izay tondroin'ny siosion-dresaka fa nanararaotra ny fandrobàna nitranga taorian'ny revolisiona Aprily 2010 ilay politisiana. Tsy nilaza ho mila vola ny Ata-Meken, na izany aza, fa tiany ny filoha mba hanao fialan-tsiny imasom-bahoaka.
Ity fifandonanana miverimberina eo amin'ny filoha sy ny mpanohitra ity dia nateraky ny fanoherana nomanin'i Tekebayev manoloana ny fanovana ny lalàmpanorenana tamin'ny herintaona. Kanefa raha ny marina, tsy dia misy dikany loatra ny fanovana natao, hita miharihary fa feno fitaka sy masiaka ny tolona ara-politika.
Migadra amin'ny toeram-pamonjàna vonjimaika [mialoha ny fitsarana] i Tekebayev ankehitriny, izay hanomezany fanamarihana tsindraindray amin'ireo mpisolovavany. Tamin'ny fanambarana nataony vao haingana tany am-ponja fa tokony hizaha ny toe-pahasalamy i Atambayev hahafantarany ny fahasalamany ara-tsaina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/14/96775/
 nomena lisansa ho azo ampiasaina indray: http://static.kremlin.ru/media/events/photos/big/eyv2rLTqbuKhb2jNGcJAeLnaphmGoxor.jpg
 lahatsoratra fiarahamiasa: http://www.eurasianet.org/node/82746